Digby: Kutyaira Yemunharaunda Commerce neMobile Apps | Martech Zone
Chitatu, Ndira 2, 2013 Douglas Karr
Kutenda kwangu kuti iko kunyora kuri pamadziro uye zvitoro zvekutengesa zvava kuita mari inodiwa mumazano enhare. Nhare yave kiyi yekutsvaga kwevatengi uye maitiro ekutenga Yakasanganiswa nekutora kukuru kwemafoni efoni, pane kusahadzika kushoma kwekukanganisa nharembozha ichave mumakore anouya. Digby inopa SDK uko iko kwekushandisa kwevatengesi nharembozha inogona nyore kuisa geofencing - ita kuti nzvimbo yeapp-izive nenzvimbo yaDigby-based analytics uye kugona kwekushambadzira.
Kubudikidza neDigby Localpoint ™ Mobile Platform, inosanganisira Analytics, Outreach, Venue, uye Storefront, Digby inoshandisa tekinoroji-yekutendera nzvimbo kuitira kuti mabhenji asundire anoshanda, anotarisisa nzvimbo-anoziva meseji nekukwezva, kukanganisa, uye kuve nehukama nevatengi vavo mhiri nzira dzese - zvese kuburikidza neyakajairwa yavo yepamhepo ruzivo.
Digby Localpoint ™ Nharembozha
Localpoint Kunze - Vatengi vanogona kuve matanho kubva pane ako akanakisa madhiri uye haambozviziva. Nei uchivarega vachifamba neapo iwe uchigona ipapo ipapo uye pachako kusvika nekuvakwevera muchitoro nekutaurirana kwavari zvakananga kuburikidza neyako nharembozha? Digby Localpoint Outreach inokubatsira iwe kugadzira kubatana ikoko neine simba suite yenzvimbo-inoziva yekushambadzira kugona yakagadzirirwa chete kune zvigadzirwa.
Nzvimbo Yemunharaunda - Smartphone inogonesa vatengi vava kukwanisa kutarisa mitengo yemukwikwidzi pavanenge vachifamba munzira dzako. Enda pane zvinogumbura nekupa yako yakasarudzika nhare mbozha inotyaira kukosha, kubatanidzwa uye yekupedzisira kadhi rekuvimbika. Digby Localpoint Venue inoita kuti iwe uve mushopu kupinda muchitoro neine seti yezvishandiso yekuzivisa, kubatsira, uye kukurudzira vatengi vakabatana nguva uye kwazvinonyanya kukosha.
Localpoint Analytics - Zvinopfuura makumi mapfumbamwe muzana zvemari yekutengesa zvinouya kubva muchitoro asi zvishoma kwazvo izvo zvava nezve mutengi analytics muchitoro. Digby Localpoint Analytics inoita kuti iwe uwane webhu-sitayilo analytics yenzvimbo dzako chaidzo uye data rakakosha nezvekuti uye vatengi vako pavanoshanyira chitoro chako sei, zvichikubvumidza iwe kudzidza zvakawanda pamusoro pavo kuvashandira zvirinani.
Localpoint Chitoro - Vatengi vanoda kuti yako yakatsvaga yekutsvaga, kubhurawuza uye utenge mbozha ruzivo kuti inakidze, ive nyore uye inokosha mune zvese zvinopihwa uye zvemukati. Digby Localpoint Chitoro chinokutendera kuti ugadzire yakasarudzika, yekutengesa-inogoneswa yekutenga ruzivo uye kukurudzira uye kuzivisa mutengi wako kuburikidza neyako branded nharembozha app uye nhare yakagadziridzwa webhusaiti.
Tags: Androiddigbydigby localpointgeofencingiPhonenhare mbozhanzvimbo inozivamobile analyticsnharembozha sdk